CDMA 70,72 09999 ဖုန်းများ အချိန်မှီ လဲရန်လို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » CDMA 70,72 09999 ဖုန်းများ အချိန်မှီ လဲရန်လို
CDMA 70,72 09999 ဖုန်းများ အချိန်မှီ လဲရန်လို
Posted by ဆူး on Jul 7, 2011 in Myanma News | 14 comments
သူငယ်ချင်းဆီက ရုတ်တရက် ဖုန်းဆက်လာပြီး သတိပေးပါတယ်။
အရင်က ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မိုင် ၂၀ ၀န်းကျင်သာ ရတဲ့ စီဒီအမ်အေ ဖုန်း အလုံးကြီးများ နှင့် ဆယ်လူလာ ဖုန်းများ မကြာမီ ဖျက်သိမ်းမယ် ဆိုတာ သိခဲ့ရလို့ အချိန်မှီ ၅သိန်းဖုန်း တခု နဲ့ လဲရန် သတိပေးကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ လဲခိုင်းနေတာတော့ အတော်ကို ကြာနေပါပြီ။ လက်ရှိ ကိုင်နေတဲ့ ဖုန်းကို ဘာမှ မလုပ်သေးတဲ့ အတွက် မလဲပဲ ပေကပ်နေတဲ့ သူများ လဲနိုင်ရန် သတိပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လတ်တလော ထိုဖုန်းများ ပိုင်ဆိုင် ထားသူများ ဖုန်းနံပါတ် သွားလဲဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတော့ သေချာတယ် လို့ ပြောသွားတယ်။ ဆူး ကတော့ ယနေ့ နောက်ကျသွားလို့ နက်ဖြန်မှ သွားစုံစမ်းပြီး လဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ ပိတ်ဖို့ အချိန် ၂ပတ်လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ် လို့ ကြားရလို့.. မသိသေးသူများ စုံစမ်းပြီး လှုပ်ရှားကြပါ။
15ကျပ်နဲ့ သုံးလို့ မရတော့ဘူးလေ အဟဲ ဒါကြောင့် အတင်းလဲခိုင်းတာ အစ်မရဲ့
လှုပ်ရှားကြပါစို့ လား ကိုစီကြီး တို့ မောင်ဆဲလူ တို့ 
ပါတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
CDMA အကုန်လုံးကို လား
နောက်နေ့တော့ ကိုယ်တိုင် သွားစုံစမ်းမှာပါ.. တိတိကျကျ သိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကြားတဲ့ သတင်း နောက်မကျရလေအောင် လက်တို့တဲ့ သဘောပါပဲ။
ဒါဆိုရင်တော့ အရင်ကသုံးသလောက်သုံးရင် ဖုန်းခ ၃ ဆ ပိုကုန်ကျတော့မှာပေါ့ …
အဲဒါ ကြောက်လို့ မလဲ ပဲ ပေကပ်နေနေတာ.. အခုတော့ သူငယ်ချင်းက ၂ပတ်လောက် ပဲ အချိန်ရတော့တယ် လုပ်တော့ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ပြောလို့ မသိသေးသူများ သတင်းပေးတာပါ။ လဲချိန်တန် မလဲလိုက်လို့ ဒီတိုင်းပဲ ထားလိုက်ရင် လုံးဝ ထုတ်မပေးတော့ဘူး ပြောတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ သိဘူးနော်.. ကြားတာပဲ။
ဒီနေ့ သွားစုံစမ်းတာ.. ၁သိန်း နဲ့ အထက်တွေကြီးပဲ.. အားလုံးက လမ်းကြောင်းနဲ့လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း ၉၉ တွေ လိုင်းပိတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်။ မကြာခင် တခြား ဖုန်းတွေ လာမယ် ဘယ်တော့လဲ ဆိုတော့ အတိအကျ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ကြပါဘူး။
လမ်းကြောင်း ဆိုတာ… ဖုန်းချပေးတဲ့ လူ နာမည်နဲ့ လိပ်စာ ကို ခေါ်စာလာပါတယ်တဲ့ အဲဒီ စာနဲ့ လာတဲ့ လူဆို ရင် အပိုကြေး ပေးစရာ မလိုပေမဲ့ ဖုန်းချ ပေးတဲ့ လူနာမည် နဲ့ လိပ်စာ က မဟုတ်ရင်တော့ အဲဒီ ခေါ်စာ မရှိရင် ခေါ်စာ ရဖို့ အာရကီး လိုပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် လုံးပန်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင် နာမည်ပြောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ မူရင်း ပိုင်ရှင် နာမည် ရဲ့ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ နဲ့ ပြောင်းချင်တဲ့ လူ ရဲ့ မှတ်ပုံတင် နဲ့ မိတ္တူ ဓါတ်ပုံ ၄ပုံ.. ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
သွားလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အသက်သာဆုံး လမ်းကြောင်းကို ရှာနိုင်ကြပါစေ။
ပထမ စချတဲ့ တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းတန်ဖုန်း GSM တွေကို ငါးသိန်းဖုန်းတွေပေးမယ်ကြားပြီး မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးလား။ သိရင်ပြောကြပါဗျာ..။
ငါးသိန်း GSM လိုချင်ရင်ရတယ် ၁၅ သိန်းဖုန်းကို ၆ သိန်းခွဲလောက်နဲ့ရောင်းပြီး ၅ သိန်းတန် ဖုန်းဝယ်လိုက်. …..
ဒါဆို ၁ သိန်းခွဲလောက် ကျန်တယ် …. ဟန်းဆက် အသစ်တစ်လုံး ဝယ်လို့ရပြီ …. ဗျ …..
ကျေးဇူပါ မမဆူး…မန်းလေးကိုသွားလဲရင်လဲ ဖုန်းတလုံးဖိုးလောက်ကုန်းအုံမယ် သွားပါပြီးဗျာ..